Lily O'Briens - N'ime obodo
Tọrọ ntọala na 1992 na kichin Kildare nke Mary Ann O'Brien, Lily O'Brien's bụ otu n'ime ndị na -emepụta chocolate na Ireland.
Chocolates nke Lily O'Brien malitere ndụ dị ka echiche nke Mary Ann O'Brien bụ onye, ​​mgbe ọ gbakere n'ọrịa na -agwụ ike na mbido 1990, chọpụtara ezigbo agụụ maka ihe niile chocolate. N'ịga njem nchọpụta, Mary Ann kwanyeere ikike ịme chocolate n'etiti ndị isi ụwa na chocolatiers na South Africa na Europe tupu ịmalite obere ụlọ ọrụ ya site na kichin Kildare ya na 1992.
Ọ bụrụ na ị bụ onye hụrụ chocolate n'anya, gbaa mbọ lezie anya maka ụlọ ahịa mmapụta na Kildare Village. Ọ bụ ihe nlegharị anya n'ezie na paradaịs chocolate!
Ndị na-emepụta, Newbridge
Green Road, Newbridge, Obodo Kildare, Ireland.